အားကစား - Sportwetten အွန်လိုင်းကာစီနို - 7Betwin အားကစား - Sportwetten အွန်လိုင်းကာစီနို - 7Betwin
7Bet.win အဖွဲ့သည်အားကစားဖြစ်ရပ်များ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပတ်သတ်၍ အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုအမြဲတမ်းပေးသည်. စာသားအသစ်များကိုနေ့တိုင်းတင်သည်. 7Bet.win အသင်းသည်အားကစားကိုအဓိကထားသည်, ငါတို့အားလုံးနီးပါးအားကစားအတွက်စာသားရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်သင်ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ။?
သင်သည်အားကစားအားလုံးအပေါ်လောင်းနိုင်သည်. ကိစ္စမရှိပါဘူး, သင်ဘောလုံးကစားနေလား, လက်ပစ်ဘောလုံး, ဘတ်စကက်ဘော, သေတ္တာများ, ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအားကစားများလောင်းခြင်း. ကိစ္စမရှိပါဘူး, တိုက်ရိုက်ဂိမ်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်၌ဂိမ်းရှိမရှိ, Bundesliga ရှိမရှိ, ချန်ပီယံလိဂ်, ဥရောပချန်ပီယံသို့မဟုတ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ. ငါတို့ထံမှအားကစားအားလုံးနီးပါးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုသင်ရလိမ့်မည်. ကျွန်ုပ်တို့၏စာများကိုရိုးရှင်းစွာရေးသားထားသည်, နားလည်အားလုံးအသက်အရွယ်အဘို့အသင့်လျော်။
ပြaနာပေါ်လာရင်, မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုဆက်သွယ်ပါ. ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများကသင့်အားကူညီလိမ့်မည်, ချက်ချင်းမေးခွန်းများကိုနှင့်မရေရာဒွိဟဖြေရှင်းရန်.
သင်၏အလည်အပတ်ခရီးများနှင့်သင်၏အလောင်းအစားများကို 7Bet.win တွင်မျှော်လင့်ပါသည်.
7Betwin အောက်တိုဘာလ 17, 2020
ကျွမ်းဘားအားကစားသည် အားကစား၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. နဂိုက (ဂျိန်းခေတ်) ကာယလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် စုပေါင်းအသုံးအနှုန်း, အပါအဝင် […]
Go ၏သမိုင်း- ကားများ
7Betwin အောက်တိုဘာလ 15, 2020
ကာတာ, Go-kart လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။, ပထမတစ်ချက်မှာ ခြေနင်းကားတစ်စီးကို သတိရမိသည်။. အပေါ်မှကြည့်လျှင် ဘဲဥပုံဖြစ်သည်။, ပြားချပ် […]
7Betwin အောက်တိုဘာလ 13, 2020
7Betwin အောက်တိုဘာလ 10, 2020
slacklining တီထွင်မှုသည် Yosemite အမျိုးသားဥယျာဉ်ရှိ တောင်တက်သမားများတွင် မူလအစရှိသည်။ (ကယ်လီဖိုးနီးယား, အမေရိက) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။. 70 ခုနှစ်များတွင် […]
7Betwin သြဂုတ်လ 19, 2020
ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ရေးတွင် အေရိုးဗစ်ခံနိုင်ရည်ရှိစေမည့် လေ့ကျင့်မှုအမျိုးအစားများစွာပါဝင်သည်။,တွေးမိတွေးရာ- နှင့် သွက်လက်သော လေ့ကျင့်မှု,ညှိနှိုင်းရေးသင်တန်းနှင့် EMS လေ့ကျင့်ရေးတို့ကဲ့သို့ လျှပ်စစ်နှိုးဆွမှု […]
7Betwin သြဂုတ်လ 8, 2020
7Betwin သြဂုတ်လ 5, 2020
နှင်းလျှောစီးခြင်းသည် ဆောင်းရာသီ အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်။, အားကစားသမားတစ်ဦးသည် လျှောလျှောလျှောစီးကာ နှင်းလျှောစီးစကိတ်ပေါ်တွင် ခုန်ချသည်။, အရှိန်မြှင့်ရန်, ပြီးတော့ စားပွဲပေါ်မှာ […]
7Betwin သြဂုတ်လ 2, 2020
နိုင်ငံဖြတ်ကျော် နှင်းလျှောစီးခြင်း တီထွင်မှု နိုင်ငံဖြတ်ကျော် နှင်းလျှောစီးခြင်းသည် Nordic ပညာရပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် အမြဲတမ်း Scandinavian ဒိုမိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. အံ့သြစရာမရှိပါ။: […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 31, 2020
တီးမှုတ်ခြင်း၊ တံပိုးသံများဖြင့်: ခေတ်ရေစီးကြောင်းအသစ် အားကစား jugger မှ ခွေးဦးခေါင်းခွံမှ pompfe အထိ - ဤသည်မှာ သင်၏ ပျက်ကျမှုသင်တန်းဖြစ်သည်။ […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 30, 2020
gym ဘီးတွေ လာမယ်။ 90 Eduard Hoffmann ၏ ပေါ့တ်ကာစ်ကို စာရင်းသွင်းရန် အသက်ငယ်ရွယ်သူ လူငယ်တစ်ဦးသည် မေလတွင် ဂျွမ်းဘားအားကစားလုပ်သည် 2013 ၌ […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 20, 2020
Professional Experience ဆိုတာကို အများစုက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကြားဖူးကြမှာပါ။. ဂေါက်ကွင်းဂေါက်ကွင်းနဲ့ ဘာကြောင့် ဂေါက်ရိုက်ရတာလဲ […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 19, 2020
ဆေးဘောလုံးသည် ၎င်း၏အမည်ကို အမေရိကန်မှ ရရှိခဲ့သည်။. ပစ်ခြင်းနှင့် ဖမ်းသည့်အခါတွင် ကြွက်သားအားလုံးနီးပါးကို အသုံးပြုသည်။ […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 13, 2020
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့လျက်ရှိသောအားကစားသစ်တစ်ခု – တုတ်ဂိမ်း. Floorball သည်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည်, လူငယ်များနှင့်နှလုံးသားရှိသောလူငယ်များအတွက်. Floorball သည်လွယ်ကူသည်, […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 11, 2020
ဂန္ထဝင် (သို့) ခေတ်ပြိုင်အကရဲ့မူလအစကိုဘယ်သူကတကယ်သိလဲ။? အကဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သူ, အနုပညာသမိုင်းကိုလေ့လာသည်ဖြစ်စေ၊ သင်ကိုယ်တိုင်သာဖြစ်သည် […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 10, 2020
အားကစားပစ်ခတ်မှု၏အထူးအားသာချက်များပစ်ခတ်မှုအားကစားသည်အခြားအားကစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာထင်ရှားသောအားသာချက်များကိုပေးသည်. သေနတ်ပစ်အားကစားတွင်သင်မအောင်မြင်နိုင်ပါ […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 9, 2020
သေနတ်ပစ်အားကစား၏စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိနေခဲ့သည်. ယခင်ကအမဲလိုက်ခြင်းအတွက်တီထွင်ခဲ့သည်, အဝေးကြီးမှာကစားပွဲကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပါ […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 8, 2020
Motorsport တီထွင်မှုသည် Karl Benz မှမော်တော်ယာဉ်တီထွင်မှုအပြီးမကြာမီမှာပင်ဖြစ်သည် 1885 ပထမသဘောထားများသိသာထင်ရှားလာသည် […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 7, 2020
စက်ဘီးစီးခြင်း၏ တီထွင်မှုသည် မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ၎င်းသည် ထင်ရှားသော တီထွင်မှုမဟုတ်ပါ။. လူသားသည် ဘီးမရှိသည်မှာ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီ […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 6, 2020
ဘောလုံးနှင့် လက်ပစ်ဘောများတွင် ဂိုးလောင်းခြင်းပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။. ကဲ့သို့. နံပါတ်လောင်း […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 5, 2020
Aerobics သည် ကျွမ်းဘားအားကစား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ရှေးခေတ်ဂရိနိုင်ငံတွင် စတင်ခဲ့သည်။. သံစုံတီးဝိုင်း – အက ကျွမ်းဘားအားကစားသည် ရှိပြီးသားအမျိုးအစားအားလုံး၏ ပထမပုံစံဖြစ်သည်။ […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 4, 2020
အမေရိကန်ဘောလုံးသည် အမေရိကတွင် ရေပန်းအစားဆုံး အားကစားဖြစ်သည်။, လူကြိုက်များမှုအရ ဘေ့စ်ဘောတစ်ခုတည်းသာ လိုက်ဖက်နိုင်သည့်အရာ. လည်းပဲ […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 3, 2020
ဂေါက်ရိုက်မယ့် ရက်အတိအကျကို မသိရသေးပါဘူး။, ဒါပေမယ့် လက်ခံတယ်။, စကော့တလန်သိုးထိန်းများက တီထွင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ […]
Inline hockey သည် တစ်သင်းလျှင် ကစားသမားငါးဦးစီ ပါဝင်သည့် အားကစားနည်းဖြစ်သည်။ (အကွက်ကစားသမားလေးဦးနှင့် ဂိုးသမားတစ်ဦး) အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရန်. ထားပါတော့ […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 2, 2020
Intercrosse နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်များ: Intercrosse သည်အသင်းလိုက်အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်, ပျော့ပျောင်းသောပလတ်စတစ်ဘောလုံးသည်ပြိုင်ဘက်အားတုတ်နှင့်ရိုက်သည် […]
7Betwin ဇူလိုင်လ 1, 2020
ဇာတ်လမ်း :ဒဏ္gendsာရီများသည် Nomi no Sukune နှင့် Taimo no အကြား duel မှဂျပန်လက်ဆင့်ကမ်းအစဉ်အလာ၏အစဖြစ်သည်။ […]
7Betwin ဇွန်လ 30, 2020
အားကစားရုံဘီးသည်အားကစားပစ္စည်းများဖြစ်သည်, တာယာနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်, ၎င်းတို့သည်လှေကားခြောက်ခု - ရိုးရှင်းသော ၀ င်ရိုးနှစ်ခု (သုက်ပိုးပေါက်သည်), […]
7Betwin ဇွန်လ 29, 2020
လှေလှော်ခြင်း, မကြာခဏ US မှာသင်္ဘောသားအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်, အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်, သူ၏မူလအစသည်ရှေးအီဂျစ်ခေတ်သို့ပြန်သွားသည်. ၎င်းသည် […]
7Betwin ဇွန်လ 28, 2020
ကစားချိန်: ၁ မိနစ်ခွဲနှင့်မိနစ် ၂၀ နှစ်ပိုင်း. ကစားပွဲစတင်ပြီးအလယ်၌ပြန်လည်စတင်ပါ။. ဒါကဖြစ်တတ်ပါတယ်, […]
7Betwin ဇွန်လ 27, 2020
Triathlon (Triathlon) အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါဟာ မော်တော်ယဉ်ပြိုင်ကားပါ။, ထိုတွင် ပါဝင်သူများသည် အဆင့်သုံးဆင့် ဆက်တိုက်တက်ကြသည်။ […]
7Betwin ဇွန်လ 26, 2020
လူကြိုက်များသော ဆောင်းရာသီအားကစားသည် ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင်သာမက အားကစားသမားများကြားတွင်ပါ ဆောင်းရာသီအားကစားများ ပိုမိုရေပန်းစားလာပါသည်။. ဆောင်းရာသီ အားကစားကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ […]
7Betwin ဇွန်လ 25, 2020
ငယ်ငယ်က စက်ဘီးစီးရတာကို မကြိုက်တဲ့သူက ဘယ်သူလဲ။, အကြံကောင်းဖြစ်ရင် အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လည်း ပေါင်းတယ်။ […]
7Betwin ဇွန်လ 24, 2020
Atiker Konyaspor သည် ထူးခြားသောကွန်ဂရက်ကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။, တည်ထောင်ခြင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့နှင့် ပတ်သက် 1981 သည်အထိ 22. ဇွန်လ 1922, Foundation ပထမနှစ်, ရန် […]
7Betwin ဇွန်လ 23, 2020
Trabzonspor သည် လက်ရှိတွင် ဘောလုံးလောကတွင် ထိပ်တန်းအသင်းတစ်သင်းဖြစ်သည်။, ဘတ်စကက်ဘောနှင့် လက်ပစ်ဘောတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။. အဲဒီအကိုင်းအခက်တွေအပြင် […]
7Betwin ဇွန်လ 22, 2020
Galatasaray သည် လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ခန့်က စတင်ခဲ့သည်။. “အားကစားစာအုပ်များသမိုင်း၌ Galatasaray သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ရှင်းပြသည် […]
7Betwin ဇွန်လ 20, 2020
ဂျာမန်ဘောလုံးအသင်းသည် FC ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ထက်ဆုဖလားများများမစုဆောင်းဖူးပါ. အပေါ် 25 နိုင်ငံချန်ပီယံများသည်ကလပ်မှလာသည် […]
7Betwin ဇွန်လ 18, 2020
Konyaspor တွင်ဝင်ကြေး- ရာသီနှင့်နိုင်ငံခြားဘောလုံးသမားများ 2018-2019 ကြေငြာခဲ့သည်. အဖြူနှင့်အစိမ်း, Aykut Kocaman in der ၌သေဆုံးသည် […]
7Betwin ဇွန်လ 13, 2020
ကလေးဘ ၀ နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးများကိုကစားခြင်းကိုမည်သူကမကြိုက်ခဲ့သနည်း။, ဓားပြများ၊. ဘယ်ကလေးကမှမလိုချင်ဘူး […]
7Betwin ဇွန်လ 12, 2020
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ 7bet.win အဖွဲ့သည်ခွေးအပြေးပြိုင်ပွဲအကြောင်းသင့်အားရှင်းပြလိမ့်မည်, အဲဒီအကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုငါတို့ပြောပြမယ် […]
7Betwin ဇွန်လ 5, 2020
Parkour သည်မြို့တစ်မြို့တွင်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်, သင်တန်းသားများသည်သတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပြေးကြသည်, ဒါကို အမြန်ဆုံးလုပ်ဖို့ လိုတယ်။ […]
7Betwin ဇွန်လ 1, 2020
ဂေါက်ရိုက်မယ့် ရက်အတိအကျကို မသိရသေးပါဘူး။, ဒါပေမယ့် လက်ခံတယ်။, စကော့တလန်သိုးထိန်းများက တီထွင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။, […]
7Betwin မေလ 31, 2020
ကမ္ဘာကျော် စစ်တုရင်ဂိမ်းသည် ဗျူဟာမြောက် ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။, ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်ရှိ အပိုင်းအစများကို ကစားသမားနှစ်ဦး အလှည့်ကျရွှေ့ပေးသည်။. ထားပါတော့ […]
7Betwin မေလ 30, 2020
တစ်ယောက်က Deutsch Rock ဆိုတဲ့ နာမည်ကို နားမလည်ဘူး။, နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလို့ ဆိုရမှာပါ။, ဒါပေမယ့် သီချင်းအမျိုးအစား, ဘယ်မှာလဲ။ […]
အားကစားလောကသည် ကြီးမားသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။. ဒါတွေက ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေပါ။, ခန္ဓာကိုယ်ကို လေ့ကျင့်ပေးတယ်။, ပျော်စရာပေးဆောင် […]
7Betwin မေလ 27, 2020
ဆောင်းရာသီသည် အထူးအေးသောအချိန်ဖြစ်သည်။, ဆောင်းရာသီမှာ အားကစားလုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ လူအများက ထင်နေကြတယ်။ […]
ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေ၊
7Betwin မေလ 26, 2020
ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေက ဘယ်သူ့ကိုမှ အကြံပြုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။. မင်းဒုက္ခ, သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အရမ်းကြိုက်တယ်။. အများကြီးရှိတယ်။ […]
7Betwin မေလ 25, 2020
ငါတို့ဘာတွေတွေးနေတာလဲ, စီးဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားရတဲ့အခါ၊? မြင်းစီး အားကစားမှာ!မြင်းစီးအားကစားကို နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းက လူသိများလာခဲ့သည်။ […]
ဘောလုံးအကျော်အမော် Helmut Rahn
1954 Rahn ကို ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဘောလုံးကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအတွက် အမျိုးသားနည်းပြ Sepp Herberger မှ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည်။. ပြီးတာနဲ့ ချက်ခြင်း runner-up 1953/54 ၌ […]
7Betwin မေလ 23, 2020
ဤစာပိုဒ်တွင် ကိုယ်ခံပညာ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်းပြပါမည်။, ကိုယ်ခံပညာက ဘယ်ကလာတာလဲ။, ကိုယ်ခံပညာ လေ့ကျင့်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ, […]
မင်္ဂလာပါ 7bet.win မှကြိုဆိုပါတယ်။. ဒီနေ့တော့ ယောဂအကြောင်းပြောမယ်။. ယောဂဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ မင်းကို ငါတို့ရှင်းပြမယ်။, ဘာအတွက်လဲ […]
အပြင်မှာ ဘယ်လို အားကစားလုပ်မလဲ။ ?
7Betwin မေလ 21, 2020
အပြင်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်လား။, ဒါဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါ။. အပြင်မှာ အားကစားလုပ်တဲ့အခါ, ပြီးရင် မင်းလုပ်ပါ။ […]
အားကစားလုပ်ရင်း တစ်ချိန်တည်းမှာ အများကြီးစားပါ။
အားကစားလုပ်ချင်သလား, ကျန်းမာသောဘဝ, အားကစားဆန်တဲ့ ဘဝကို စတင်ပြီး စားရတာ အရမ်းကြိုက်တယ်။. ဒါကြောင့် အားကစားပိုလုပ်ချင်တယ်။ […]
7Betwin မေလ 20, 2020
Brennball ဂိမ်းကို ကစားနည်းBrennball ဂိမ်းကို အုပ်စုနှစ်စုဖြင့် ကစားသည်။. တစ်ဖွဲ့က ကွင်းပြင်မှာ ရပ်နေတယ်။ […]
အစားအသောက်က အရမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာပါ။. အစားအသောက် ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်။. ၎င်းသည် […]
အားကစားဂိမ်းများ, ကျောင်းမှာ ကစားတယ်။
7Betwin မေလ 19, 2020
အားကစားဂိမ်းများအတွက် အကြံဥာဏ်များ လိုချင်လျှင်, သင့်အား စာရင်းတစ်ခုပေးနိုင်ပါသည်။: ဒီလို အားကစားပွဲတွေကို ကျောင်းမှာ ကျင်းပတယ်။ […]
သွေးပူဂိမ်းများ / ကာယပညာအတွက် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်တို့၏ site မှကြိုဆိုပါသည်။, ကာယပညာအတန်းအတွက် သွေးပူဂိမ်းများ လိုအပ်သည်။, မှန်ကန်သော အရပ်သို့ ရောက်လေပြီ။. အဆိုပါ […]
Corona အကျပ်အတည်းမှာ အစားအသောက်
ကိုရိုနာအကျပ်အတည်းမှာမင်းအစားအသောက်စားချင်တယ်, မလွယ်ကူပါဘူး, တစ်ယောက်တွေးကောင်းတွေးနိုင်တယ်. မင်းမမှားပါဘူး, […]
မင်္ဂလာပါ။ ကြိုဆိုပါတယ်, သူတို့မှာအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေရှိတယ်, သင်လည်းရနိုင်သည်, အားကစားဂိမ်းတွေကနေမင်းကိုဘယ်လိုပေးသလဲ, ငါတို့မှာရှိတယ် […]
7Betwin မေလ 18, 2020
ကျောင်းတွေပါမယ် 2020 ခဏလောက်ပိတ်ထားတယ်. ကျောင်းများသည်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်သည်. ဗိုင်းရပ်စ်ကို Corona closed ဟုခေါ်သည်. သည် […]
ဟိုတယ်များစွာ, Corona ကြောင့်တည်းခိုခန်းများနှင့်စျေးဆိုင်များပိတ်ထားသည်. ဒါကိုအရင်ကလည်းငြင်းခဲ့ဖူးပါတယ်, ဒါကိုကြိုပြီးတော့ငါတို့လုပ်မယ်. […]
7Betwin မေလ 17, 2020
တနှစ်ထဲမှာ 2020 ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဂျာမန်ဘာသာ၌အလွန်ဆိုးဝါးပြီးအန္တရာယ်ရှိသောဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုရောက်လာသည်. ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကနေရာတိုင်းနီးပါးမှာရှိတယ် […]
စက်ဘီးစီးခြင်းဆိုတာဘာလဲ? စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုဆိုလိုသည်, စက်ဘီးဖြင့်ပတ်ပြီး. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းအဖြစ်စက်ဘီးကိုသင်သုံးနိုင်သည် […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပါ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနီးပါးစစ်တိုက်ခဲ့သည်. ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည်လုံးလုံးလျားလျားမရှင်းလင်းပါ, ဖြစ်ခဲ့သည် […]
7Betwin မေလ 16, 2020
စားပွဲတင်တင်းနစ်ကစားနည်းသည်သင်ကစားပွဲတစ်ခုတွင်ကစားသည့်တင်းနစ်ကစားနည်းနှင့်တူသည်။ စားပွဲတင်တင်းနစ်တွင်သင်တစ် ဦး တည်းကစားလေ့ရှိသည် […]
ကျောင်းမှာနှစ်စဉ်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေရှိတယ်. ဘာလင်တွင်၎င်းမှကျောင်းသားတိုင်းဖြစ်သည်3[…]
7Betwin မေလ 15, 2020
ဂိမ်းအစတွင်သင်အုပ်စုနှစ်စုကိုရွေးချယ်ပါ, အုပ်စုနှစ်စု (သို့) အတိုက်အခံများသည်အချင်းချင်းတိုက်ကြလိမ့်မည်. ထို့နောက် […]
ဂဏန်းဘတ်စကတ်ဘောကစားနည်းတွင်နှစ်သင်းသည်အများအားဖြင့်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ကစားကြသည်. ဘတ်စကတ်ဘောကစားနည်းကိုကစားသည်. အဖွဲ့ထဲမှာတစ်ခါ […]
7Betwin မေလ 14, 2020
ရေကူးဆိုသည်မှာရေထဲတွင်ရွေ့လျားခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်. လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များသည်ရေကူးပြီးသို့မဟုတ်ရေကူးနိုင်သည် […]
ဂျာမနီရှိကျောင်းအားလုံးနီးပါးသည်ကာယပညာရှိသည်. ကျောင်းသားအများစုသည်ကာယပညာကိုနှစ်သက်ကြသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းဘယ်လောက်များများ […]
7Betwin မေလ 13, 2020
ဂျူဒိုဂျူးဒိုသည်ဂျပန်ကိုယ်ခံပညာဖြစ်သည်. ဂျူဒို၏နိယာမမှာ“ အရှုံးပေးခြင်းဖြင့်အနိုင်ရခြင်း” (သို့)“ အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှု” ဖြစ်သည် […]
မထိုက်မတန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။? စကားလုံး “fit” အင်္ဂလိပ်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များမှလာသည် “သင့်လျော်သော” ဒါမှမဟုတ် “သင့်လျော်သော”. မင်းလည်းလုပ်နိုင်တယ် […]
အပိုဆုဆိုတာဘာလဲ။ အပိုဆုဆိုတာဘာလဲ? အပိုဆုစကားလုံးသည်လက်တင်စကားမှဆင်းသက်လာပြီး“ ကောင်းသော” အပိုဆုကိုဆိုလိုသည်: အပိုဆုငွေပေးချေမှု. […]
7Betwin မေလ 12, 2020
အဖွဲ့ရှိ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုပုံစံများသည် ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် ကြံ့ခိုင်မှုတိုးလာစေရန်နှင့် အပြုသဘောဆောင်သောအဖွဲ့အတွေ့အကြုံရရှိရန် ရည်ရွယ်သည်။. အဆိုပါ […]
Riding ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ, ယောင်္ကျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊, ကြီးသည်ဖြစ်စေ ငယ်သည်ဖြစ်စေ […]
7Betwin မေလ 11, 2020
အားကစားဆိုင်ရာအလောင်းအစားသည်အလောင်းအစားဖြစ်သည်, သူစိမ်းနှင့်အတူအားကစားပွဲတစ်ခုအတွက်လောင်းပါ. အားကစားဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းသည်စာအုပ်ပြုသူနှင့်ဖောက်သည်များအကြားရုန်းကန်မှုဖြစ်သည်. […]
မင်္ဂလာပါ၊ 7Bet.win မှကြိုဆိုပါသည်, သင်အားကစားတစ်ခုရှာနေသည်, ထိုအခါသင်သည်ငါတို့၌ရှိ၏. ငါတို့မှာ 7Bet.win အဖွဲ့ရှိတယ် […]
အလောင်းအစားများဘာလဲ? လူအများစုကဤမေးခွန်းကိုအလိုလိုသိနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အတိအကျနှင့်အဓိပ္ပါယ်ပိုမိုခက်ခဲသည်. […]
Sportwetten အွန်လိုင်းကာစီနို - 7Bet.win © 2022. မူပိုင်ခွင့်.